Home Wararka Axmad Karaash oo xilka ka qaaday wasiiradii Deni ku adeegan jiray
Axmad Karaash oo xilka ka qaaday wasiiradii Deni ku adeegan jiray
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa wareegto uu soo saaray ku sheegay in uu xilalkii ka qaaday Wasiiradda Maaliyadda Xasan Shire Abgaal, Arrima Gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad iyo Amniga Cabdisamed Galan.
Axmed Karaash ayaa wareegtada ku sheegay in uu C/risaaq Mire Xassan (Gaawiido) u magacaabay Wasiirka Maaliyada, halka Cabdiqani Xaashi Cali Ciise (Bumbo) u magacaabay Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyaynta, sidoo kale wuxuu Axmed Xaaji Ibraahim Cartan (Bakiin) u magacaabay Wasiirka Amniga iyo DDR-ta.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa horay u sheegay in aysan dhaqangal ahayn wareegto kasta oo uu soo saaro Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland.
Khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa cirka isku sii shareeraya, iyadoo Madaxweyne Deni ku mashquulsan yahay ololaha doorashada madaxweynaha Dowladda Federaalka.
Previous articleFarmaajo oo ergo u dirsaday kooxda Shabaab – Sababta?
Next articleMuwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay dalka K/Afrika
Jawaabta Qabow ee Beesha Caalamka iyo Weeraradii Shacbiga ee Saaka iyo...
Ciidamada Amniga Galmudug oo howlgalo ka saameeyay magaalada Galkacyo